Vaovao - Mailo ny mpampita! Nikomy ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena! Voasakana ny seranana! Aparitaho ny fantsona tery!
Mailo ny mpampita! Nikomy ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena! Voasakana ny seranana! Aparitaho ny fantsona tery!
Vao tsy ela akory izay, dia nisy korontana lehibe nitranga tany amin'ny firenena maro manerantany, anisan'izany ny hetsi-panoherana tany Pays-Bas, India, Aostralia ary Russia!
Vao tsy ela akory izay, fitokonana lehibe any Frantsa no natomboka tanteraka. Olona 800 000 farafaharatsiny no nandray anjara tamin'ilay fihetsiketsehana hanohitra ny fanavaozana ny rafitry ny governemanta. Voakasik'izany, voasakana ny fiasan'ny indostria maro. Noho ny fifandonana misy eo amin'ny governemanta frantsay sy ireo sendikà, dia hiharatsy ny korontana ao amin'ny seranan-tsambo English-French Strait amin'ny herinandro ambony.
Raha ny sioka nataon'ny Departemantan'ny Logistics UK (Logistics UK) dia nampahafantarina fa hisy fiantraikany amin'ny làlambe sy seranan-tsambo ny fikomiana nasionaly frantsay, ary nanamafy ny federasiona frantsay an'ny sendika CGT fa handray andraikitra izy amin'ny alakamisy.
1. Voasakana ny fitaterana entana
Nanambara ny CGT fa izany dia tao anatin'ny fitokonana faobe narahina sendika hafa.
Nisy ny mpitondra tenin'ny mpitondra teniny nilaza fa: "Ny sendika CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL ary FIDL dia nanolotra hetsika hotontosaina any amin'ny toeram-piasana amin'ny faritra maro amin'ny 4 febroary, ary hitokona eran'ny firenena ny sampana rehetra."
Ity hetsika ity dia valin'ny "fanapaha-kevitry ny governemanta mahatsiravina" nandritra ny valan'aretina. Nilaza ny sendika fa ny fihenan-tsofina dia “fanapahana hetra ho an'ny mpanankarena” fotsiny.
Ny tompon'andraikitra frantsay dia mbola tsy namaly ny fangatahana fanehoan-kevitra, fa ny mpitondra tenin'ny Departemantan'ny Logistikan'i Angletera dia nilaza fa manantena izy ireo fa ho "mazava kokoa rehefa mandeha ny fotoana" ary nanamarika fa hiresaka amin'ny firenena amin'ny alatsinainy ny filoha Macron.
Raha ny loharanom-baovao dia mety misy fanakanana seranan-tsambo amin'ny fitokonana faobe, ka mahatonga ny rojom-panomezana izay efa miady amin'ny Brexit sy ny pnemonia satro-boninahitra vaovao hanaratsy ny raharaha.
2. Misaraka amin'ny sisin-tany iray i Frantsa sy i Angletera
Nilaza ny mpampita entana iray sy ny fampahalalam-baovao: "Mety haharitra andro maromaro ny fitokonana, miankina amin'ny halavany sy ny fahaizan'ny fikomiana, satria ny herinandro dia tsy maintsy manery ny fiara mihoatra ny 7,5 taonina."
“Raha vantany vao ambara ireo pitsopitsony dia hojerentsika ny lalana mankany Eropa mba hahitana raha azo ialana ireo seranana frantsay. Araka ny fomba nentim-paharazana, ny fitokonana any Frantsa dia kendrena ny seranan-tsambo sy ny fotodrafitrasa an-dalambe mba hampitomboana ny fahasimbana sy hanasongadinana ny antony nahatonga azy ireo '. ”
"Rehefa nieritreritra izahay fa tsy tokony hiharatsy ny toe-draharaha, ny toe-javatra eo amin'ny sisintany sy ny fitaterana an-tanety any Eropa dia mety hiteraka fahavoazana indray ho an'ireo mpivarotra any Angletera sy EU."
Ny loharanom-baovao dia nilaza fa niaina fitokonana tamin'ny sehatry ny fanabeazana, angovo ary ny fahasalamana i Frantsa, ary toa ratsy ny zava-misy any Frantsa, miantso karazana fidirana an-tsehatra mba hahazoana antoka fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fikorianan'ny varotra.
Nanampy ny loharanom-baovao: "Toa manana ampihimamba i Frantsa amin'ny hetsika indostrialy, izay tsy maintsy hanan-kery goavana amin'ny làlana sy ny entana."
Vao tsy ela akory izay, ireo mpampita raharaham-barotra avy any ivelany izay tonga tany Angletera, Frantsa ary Eropa dia nibanjina indrindra fa mety hanelingelina ny fitaterana ny entana ny fitokonana.